होमपेज / खेल / कला / कसका लागि को 'रेडी' ?
कसका लागि को 'रेडी' ?	11 Jan 2016 | 13:52pm सोमबार २७ पुष, २०७२
काठमाडौं–शनिबार दिउँसो काठमाडौँ, बानेश्वरमा फिल्म 'लक्ष्य'को 'प्रेस मिट' हुँदै थियो। कार्यक्रममा फिल्मका प्रमुख कलाकार सविन श्रेष्ठ र सारिका केसी सहभागी थिए । अर्की अभिनेत्री अनु शाह कार्यक्रममा सहभागी थिइनन्। सविन र अनुबीच अफेयर भएको फिल्म क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ । कार्यक्रममा भने बेग्लै रमाइलो दृश्य देखियो । प्रेस मिट सकिएपछि केही सञ्चारकर्मीले सविन र सारिकालाई फोटो खिचाउन भन्दै बाहिर लगे । उनीहरूले पोज–पोजमा तस्बिर खिचाए । यत्तिकैमा एक पत्रकारले सविनलाई अंगालो हाल्न आग्रह गरे ।
सविन पनि के कम ? उनले 'म त सधैँ रेडी नि !' भन्दै सारिकालाई एउटा हातले समात्दै अर्को हात पछाडि राखेर अँगालो हालिहाले । सारिका केही बोलिनन् । मात्र मुस्कुराइन् । सविनले तीन–चारपटक पत्रकारको आग्रहमा उनलाई अँगालो हालेका थिए । तर, सारिकाले केही प्रतिक्रिया जनाएकी थिइनन् । 'अनुको अनुपस्थितमा सविनले दाउ छोपेका त होइनन् ?' कतिपयले ठट्टा गरे । « धेरै थोक गुमाएकी छुः कंगना
नितालाई छाडेर सम्पदातिर ? »